Indawo yokubalekela elunxwemeni Imithetho yolwandle: 1BR1BATH, yanamhlanje
Rules Beach, Queensland, Australia
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBeryl
Isandi samaza, amanyathelo ukuya elunxwemeni. Indawo emangalisayo kwaye engabonakaliyo. I-Apartment yeyanamhlanje kwaye icocekile, ukufikelela kwinqanaba eliphantsi, indawo efanelekileyo yokubaleka kumntu omnye okanye isibini. Iveranda enkulu egqunyiweyo, iyadi ebiyelweyo. I-Aircon, igumbi lokuphumla kunye nekhitshi zidityanisiwe-ikhitshi elincinci, elisisiseko, i-cooktop yeglasi ezimbini zokutshisa, i-microwave, ifriji yebar kuphela.
Iveranda enkulu egqunyiweyo kunye neyadi ebiyelweyo. Iyunithi esezantsi ye-BR ilungele isibini okanye abasebukhweni, (okanye urente kwigumbi eliphezulu elizimeleyo le-2Br, okanye yonke indlu eyi-3BR kwizintlu ezahlukeneyo)
Igumbi elisezantsi lilungele isibini okanye abantu ababini abangatshatanga abasebenzisa i-sofabed encinci
Indawo yokuphumla, ukufikelela kwinqanaba, ukwakhiwa kwale mihla. Iveranda enkulu yangaphantsi enetafile encinci kunye neebhentshi. Igumbi lokuhlala elahlukileyo eline tv kunye nesofa. Igumbi lokuhlambela elihle langoku. ikhitshi ine-2 yokutshisa i-glasstop cooker, i-microwave, i-frypan yombane, iketile, i-toaster,
ibar yefriji. Iyadi ebiyelweyo. Impahla yokuhlamba egaraji.
I-Rules Beach ayonakaliswanga, inezindlu ezimalunga neshumi elinesibini kuphela. Indlu inempepho yolwandle, iimbono zamaza, izandi zokusefa, kunye neenkwenkwezi eziqaqambileyo ebusuku ngaphandle kwezibane zesitrato. Uhambo olude, ukubaleka kunye ne-4WD elunxwemeni, uphonononge iipaki zelizwe ezikufuphi kunye neentaka zebala ezifana ne-cockatoos ezimnyama, iifudo kunye neminenga ngexesha lonyaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Beryl